Fiteny foronina - Wikipedia
Ny atao hoe fiteny foronina dia fiteny noforonin'ny olona iray na maro ao anatin'ny fe-potoana fohy, izay samihafa amin'ny fiforonan'ny fiteny natoraly izay tsy nilana olona mamorona azy. Anefa ny fiteny, na natoraly na noforonina, dia noforonin'ny olombelona foana, ka mety sarotra tsindraindray ny manafefy ny fiteny noforonina ary ny fiteny izay lazaina fa "natoraly".
1 Filana fiteny foronina
1.1 Fiteny foronina ho fiteny iraisam-pirenena
1.2 Fampiharana filamatra ara-teôria
1.3 Fiteny manokana ho an'ny tantara noforonina
1.4 Fitiavana mamorona
3 Famoronana fiteny iray
Filana fiteny foroninaHanova
Fiteny foronina ho fiteny iraisam-pirenenaHanova
Ny antony amoronana fiteny iray vaovao dia antony ara-politika :
Ny kolontsaina manjakazaka izay manery ny kolontsaina hafa hianatra ny fiteniny dia manery ilay kolontsaina hafa hianatra ny fomba fiainana ary ny kolontsaina niavian'ilay fiteny voatery ianarana.
Ka ny fiteny noforonina, noho izy tsy mifototra amin'ny kolontsain'iza na iza, dia manampy ny mitahiry ny kolontsaina madinika ary mampatanjaka ny firaisam-pirenena, indrindra indrindra ao anivon'ireo firenena izay iara-miainana mponina maro.
Sarotra ianarana ny tenim-pirenena ka vitsy kely no tena mahafehy azy tsara mba hahafahany mifandray ary mitana resaka anatin'ilay fiteny ; ka mba ialana amin'ny fahasahiranana ara-pifandraisana vokatr'ilay tsififehezana tsara ilay fiteny, dia miforona ho azy ireo antsoina hoe fiteny iombonana izay mora ianarana, toy ny lingua franca (fiteny iraisam-pirenena tenenina eraky ny seranan'i Mediteranea tamin'ny taonjato faha-17).
Tranga manokana ny fiteny esperanto. Na dia latsaky ny iray tapitrisa aza ny isan'ny mpiteny azy, anisan'ny fiteny miasa indrindra ilay fiteny, na dia lavitra aorian'ny fiteny anglisy, ny frantsay, ny espaniola na ny arabo aza ny toerana misy azy eo anivon'ny iraisam-pirenena. Natao ho fiteny iraisam-pirenena, manana fitsipi-pitenenana ary voambolana manara-pitsipika izy ary izay no mahatonga azy mora ianarana ary mora fehezina.
Fampiharana filamatra ara-teôriaHanova
Ny fiteny noforonina sasany, toa ny loglan na ny lojban, dia noforonina mba hampihatra ireo teôria ara-piteny toy ny fiheveran'i Sapir-Whorf, araka ny hoe maneho izao tontolo izao ny fiteny.
Fiteny manokana ho an'ny tantara noforoninaHanova
Mandalina ny haifomba iray ny famoronana fiteny manokana. Ka noho izany, namorona fiteny vaovao ny mpanoratra (anatin'izany ny mpanoratra J. R. R. Tolkien), na ny mpanao horonantsary (Avatar, izay nataon'i James Cameron.).
Mety mahagaga ihany izany rehefa mieritreritra ny fotoana ilaina mba amoronana fiteny iray. Anefa rehefa mitsidika ny tranonkala dia soratana fotsiny ny teny Conlang mba ahitana ireo fiteny maro dia maro voaforona.
Ny fanadiadiana voalohany izay voasoratra momban'ny fiteny noforonina dia nosoratana tamin'ny taonjato faharoa. I Galenosy (129?-216?) no nanoratra izay, kely antsipirihany fantantsika mikasika ilay fiteny afatsy abidin'ilay fiteny. Tamin'ny taonjato faha-iraika ambin'ny folo, namorona fiteny soratana i Hildegarde an'i Bingen : ny Lingua Ignota ("fiteny tsy fantatra").
Tamin'ny taona nanjakan'i Jaques Voalohany, namorona kisarim-piteny foronina i Francis Bacon (filôzôfy anglisy).
Ny 20 Novambra 1620, i René Descartes, tanaty hafatra ho an'ny namany, mompera Marin Mersenne :
Mila fiteny iraisam-pirenena ny olombelona : ho mora dia mora ny gramerany ka ora vitsy ny ilana hahafantarana azy ; ho tokana ihany ny fiendrika ary ho tokana ihany ny bika matoanteny ; tsy hisy ny afatsy ary ho amin'ny alalan'ny tovona aman-tovana ny teny no ho voasampana
I Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917), dokoterea poloney, no namorona ny fiteny esperanto.
Famoronana fiteny irayHanova
Dimy ny fototry ny fiteny iray :
Soratra anoratana azy
Kolontsaina ifotorana (ohatra ny kolontsain'ny Esperanto).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_foronina&oldid=623764"
Dernière modification le 14 Martsa 2013, à 09:50
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2013 amin'ny 09:50 ity pejy ity.